Ny famonjena izao tontolo izao - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Ny famonjena izao tontolo izao
Tamin’ny andro nahaterahan’i Jesosy tao Betlehema, 2000 taona mahery lasa izay, dia nisy lehilahy mpivavaka iray atao hoe Simeona izay nonina tany Jerosalema. Nambaran’ny Fanahy Masina tamin’i Simeona fa tsy ho faty izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. Indray andro dia nitondra an'i Simeona ho ao amin'ny tempoly ny Fanahy Masina - ilay andro nitondran'ny ray aman-dreny an'i Jesosy Zazakely mba hanatanteraka ny takin'ny Torah. Ary Simeona, nony nahita ny zaza, dia nitrotro an'i Jesosy, ary nidera an'Andriamanitra ka nanao hoe: Tompo ô, avelao ny mpanomponao handeha soa aman-tsara araka ny teninao; fa ny masoko efa nahita ny Mpamonjy anao, Izay noforoninao teo anatrehan’ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazava ny jentilisa sy hiderana ny Isiraely olonao (Lio. 2,29- iray).
Nidera an’Andriamanitra i Simeona noho ny zavatra tsy azon’ny mpanora-dalàna, ny Fariseo, ny mpisoronabe ary ny mpanora-dalàna: Tsy ho famonjena ny Isiraely ihany no nahatongavan’ny Mesian’ny Isiraely, fa ho famonjena ny firenena rehetra amin’izao tontolo izao koa. Efa naminany izany hatry ny ela i Isaia hoe: Tsy ampy ho anao ny ho mpanompoko hanandratra ny fokon’i Jakoba sy hampody ny Isiraely izay efa niely patrana, fa efa nataoko fahazavan’ny jentilisa kosa ianao, mba ho tonga ho Ahy. famonjena hatramin’ny faran’ny tany (Isaia 49,6). Niantso ny Isiraelita avy tao amin’ny firenena Andriamanitra ary nanokana azy ireo tamin’ny alalan’ny fanekempihavanana ho olony. Saingy tsy natao ho azy fotsiny izany; Nataony ho famonjena ny firenena rehetra izany. Nisy anjely niseho tamin’ny mpiandry ondry niandry ny andian’ondriny tamin’ny alina, rehefa teraka i Jesosy.
Namirapiratra ny voninahitry ny Tompo ary niteny ilay anjely hoe:
Aza matahotra! Indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra; fa ny Mpamonjy no teraka ho anareo anio, dia Kristy Tompo, ao an-tanànan'i Davida. Ary izany no famantarana: ho hitanao ilay zaza voafono lamba ary mandry ao anaty fandriana. Ary niaraka tamin'izay dia nisy ny maro be any an-danitra niaraka tamin'ny anjely, izay nidera an'Andriamanitra ka nanao hoe: Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ ambonin'ny tany ho an'izay olona ankasitrahany (Lio. 2,10- iray).
Rehefa nilazalaza ny halehiben’ny zavatra nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy izy, dia nanoratra hoe: Fa sitrak’Andriamanitra ny hitoeran’ny be rehetra ao aminy, ary Izy no nampihavanany ny zavatra rehetra taminy, na etỳ an-tany, na any an-danitra, amin’ny alalany ny fiadanana. nataon’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana (Kolosiana 1,19-20). Tahaka ny niantsoan’i Simeona an’i Jesosy zazakely tao amin’ny tempoly hoe: Tamin’ny alalan’ny Zanak’Andriamanitra no nahatongavan’ny famonjena amin’izao tontolo izao, ho an’ny mpanota rehetra, dia ho an’ny fahavalon’Andriamanitra rehetra.
Nanoratra tamin'ny fiangonana tany Roma i Paoly:
Fa Kristy maty hamonjy antsika ratsy fanahy na dia fony mbola malemy aza isika. Zara raha misy maty noho ny amin’ny olo-marina; noho ny hatsaram-pony dia azony atao ny mikely aina. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty ho antsika fony mbola mpanota isika. Koa mainka fa ho voavonjy ho afaka amin'ny fahatezerana isika, satria ny rany no nanamarinana antsika! Fa raha nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany isika fony mbola fahavalontsika, mainka fa ny hahavoavonjy antsika amin’ny alalan’ny fiainany, rehefa nampihavanina isika (Romana). 5,6-10). Na dia teo aza ny tsy fahombiazan’ny Isiraely nitandrina ny fanekena nataon’Andriamanitra taminy, ary na dia teo aza ny fahotan’ny Jentilisa, dia vitan’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy izay rehetra ilaina ho an’ny famonjena izao tontolo izao.
I Jesosy no Mesia faminaniana, izay solontena tonga lafatra amin'ny olona ao amin'ny fanekena, ary toy izany koa ny fahazavana ho an'ny Jentilisa, izay namonjen'ny Isiraely sy ny olona rehetra tamin'ny ota ary nentina tao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny Krismasy ho fotoana hankalazana ny fanomezan'Andriamanitra lehibe indrindra ho an'izao tontolo izao, ny fanomezan'ny Zanany lahitokana, Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika.